မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 2012 Best Korean Drama Lists - Part 1 (Base on my liking)
Posted by mabaydar at 4:31 PM
Very satisfied after reading your post and thanks so much too. I haven't watched the first and last one yet. I finished Nice Guy and same feeling as you of seeing the ending. For some reason, I want both of them to be together. I feel life is so unfair when Maru is dying. At least he should live. This is one of the dramas I didn't upset of the ending. Yokkata!
Mad Cow deserved to win. I like his acting so much in Ghost.
4/03/2013 7:56 PM
@SST - yeah... I also think if Maru were to die, the drama would make me think, no matter how innocent and clever you are, if you are not rich, you still loose at the end... But the drama wrap up nicely... Thanks to the writer.
@SPP - I know you are Mad cow's fan... :P
4/03/2013 9:58 PM
Nice guy ကိုကြည့်တုန်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ဇာတ်က နာသလို ခံစားရလို့ ရပ်ထားတယ် song joon ki ကိုကြိုက်လို့မင်းသမီး ၂ယောက်မှာ မိထွေးနေရာက သူကို သိပ်မကြိုက်ဘူး မျက်နှာက မရှင်းလို့ (ကျန်တဲ့နှစ်ကားကိုတော့ ကြည့်ရသေးဝူး) ဟီးဟီး ဇာတ်ကားထက်ကို မင်းသား မင်းသမီးကို အစွဲပိုကြီးတယ်
အစ်မ Review ဖတ်ရတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် ရေးထားတာ ဂွတ်တယ် ရှာကြည့်ဦးမယ်
4/04/2013 9:36 AM
Mayflower Poe ကြိုက်တယ် အကုန်ရှာပီးကြည့်မယ် နောက်လည်းဇာတ်လမ်းကောင်း၂လေးတွေများများရီဗျူးရေး ခရီးသွားပိုစ့်လည်း မေ့မနေနဲ့ ဦးနော်
4/04/2013 9:58 AM
@AMT - ဟုတ်တယ်... မဗေဒါလဲ မိထွေးလုပ်တဲ့ မင်းသမီး အင်္ဂါရုပ်ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး... ဒါ့ကြောင့်လဲ သူရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်တာကြာပြီ ခုထက်ထိခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလုပ်ရတဲ့ကားဆိုလို့ သိသမျှထဲမှာ Coffee House ပဲရှိသေးတယ်.. ဒါတောင် ဒုမင်းသမီးနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းနေရာ... သူက ဘယ်နှစ်ကလဲမသိဘူး Ms.Korea ရထားတာနော်... Nice Guy မှာ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက ဇာတ်အရမ်းနာတယ်ထင်ရပင်မဲ့ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် သူတို့ကမှ ချစ်သူနဲ့ ပျော်ရတဲ့ အချိန်လေးရှိခဲ့သေးတယ်… ဟိုမိန်းမက ချစ်သူနဲ့လဲ မနေရ… မချစ်မနှစ်သက်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရ.. အမြဲစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးနေရတယ်လေ… သူ့သားလေးတောင် သူ့ကြောင့် ကျောင်းမှာနှိမ်ခံရတယ်လေ… ဒီတော့ အမုန်းတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အပြန်အလှန်လုပ်နေသမျှတော့ ၂ဦး၂ဘက်လုံးခံစားရမှာပါပဲ… ဒါပေမဲ့ အဆုံးမှာ မင်းသားကို သတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မဗေဒါလဲ ခံရတဲ့သူက အဆုံးထိမနိုင်ဘူးဆိုပြီး စိတ်ခုမိမှာပဲ… ဒါပေမဲ့ သူက အမုန်းနဲ့ဇာတ်မသိမ်းပဲ မေတ္တာနဲ့ ဇာတ်သိမ်းလိုက်တော့ ဇာတ်သိမ်းလေးကလှတယ်… ပြီးတော့ မင်းသားကို လုံးလုံး အတိတ်မေ့တဲ့သူလုပ်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့ခါးသီးတဲ့အတိတ်နဲ့ ယုတ်မာတဲ့အချစ်ဟောင်းကိုလဲ မမှတ်မိတော့ပဲ ရိုးသားတဲ့ သူလိုချင်တဲ့ သာမာန်အချစ်လေးနဲ့ပဲ ပျော်မွေ့သွားတာက ရင်ထဲမှာ တမျိုးလေးပဲတွေးလေ ကြည်နူးလေပဲ… အဆုံးထိကြည့်လိုက်… ကောင်းတယ်….
@Mayflower Poe - ခရီးသွားပိုစ့်တွေရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်လဲဖြစ်သလို အားပေးနေကြောင်းလဲ အမြဲအသိပေးတတ်တဲ့ ပိုးပိုးတို့လို စာဖတ်သူတွေကြောင့်မဗေဒါလဲ စာဆက်ရေးဖို့အားရှိရပါတယ်…
4/04/2013 11:27 AM
Ghost ကို ဖေ့ဘွတ်မှာ rating 5/5 ပေးထားကတည်းက ကြည့်မယ်ဆိုပြီး မကြည့်ဖြစ်သေးဘူး။
Nice guy ကတော့ စကြည့်ကတည်းက မင်းသား သံယောဇဉ်နဲ့ကြည့်တာ... ပထမဆုံးသော တယောက်တည်းသော အပြင်မှမြင်ဖူးတဲ့မင်းသားလေး) မဗေဒါနဲ့သွားကြိုတာ အမှတ်တရပဲ ... ထောက်ခံတယ် မဗေဒါပြောသလိုပဲ ဒီလောက်ကြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းလိမ့်မယ်မထင်ထားဘူး။ သူလုပ်နိုင်မယ် ဇတ်ရုပ်လည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ထားတာ။ လွဲတာပဲ။ မင်းသားရော မင်းသမီးရော သရုပ်ဆောင် အရမ်းကောင်းတယ်။ မင်းသမီးကို ကြိုက်သွားလို့ princess man တောင် ပြန်ရှာကြည့်လိုက်သေးတယ်။ princess man မှာ အဲ့ကမင်းသားကိုကြိုက်သွားလို့ Cheongdamdong Alice ကို ထပ်စွဲပြန်ရော..း)) သံသရာကို လည်နေတာပဲ။ ခုတော့ အဲ့မင်းသား မဒိန်းမှုနဲ့ တရားစွဲခံနေရတယ် (ပြောရင်း လမ်းကြောင်းတွေ လွဲကုန်ပြီ)
Bridal Mask တော့ အစပိုင်း ၃-၄ ပိုင်းကြည့်ပြီး ဆက်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ မင်းသားက အပြင်က အသိတယောက်နဲ့ ရုပ်ဆင်တယ် ခံစားရလို့ သူ့တွေ့တိုင်း ရီချင်နေတယ်။ အဲ့ဒါကို မေ့ထားရင်တော့ ကြိုက်တဲ့မင်းသားထဲ ပါပါတယ်။ အရမ်းကြီးတော့ မကြိုက်ဘူး။
4/04/2013 2:08 PM
@နွေးနေခြည် - Princess man ကို အိမ်က အမေစွဲပြီး အဲမင်းသားကို ကြိုက်တာတော့ သတိထားမိတယ်... အဲတုန်းက မင်းသမီးကို အထင်မကြီးတာနဲ့ပဲ မကြည့်ဖြစ်ဘူး... အဲကားကောင်းလား... Cheongdamdong Alice review လဲ နောက်ပိုင်းရေးတဲ့ထဲပါမယ်... တကယ်ပဲ အဲမင်းသား မဒိန်းမှုနဲ့ တရားစွဲခံရတယ်??? မနာလိုသူတွေက ထောင်ဖမ်းတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်... သူ့လောက်ချောတာ မဒိန်းကျင့်စရာတောင်မလိုဘူး မိန်းကလေးတွေဝိုင်းနေမှာ...
Bridal mask မင်းသား Joo Won မျက်နှာက အချောကြီးထဲမှာမပါဘူး... သူနဲ့တူတဲ့သာမာန်လူတွေရှိနိုင်တယ်... ဒါပေမဲ့သူက အ၀တ်အစားဝတ်ရင် စမတ်ကျပြီး ဂျစ်ကန်ကန်ပုံလုပ်ရင်အရမ်းလိုက်တယ်... အစက Baker King မှာတုန်းကလဲ သူ့ကို မချောဘူးလို့ကိုသတ်မှတ်ထားတာ... နောက်တော့ Gaksital မှာတော့ သူသရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ လက်ခံသွားတယ်...
Princess man ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ ကြည့်ရင်း မင်းသားကို စွဲလန်းသွာတာက အဓိကပေါ့လေ .. ဟဲဟဲ
တကယ်တရားစွဲခံရတာ... ဘားမှာဆုံကျရင်း ၃ယောက်လုံး (မင်းသားကို အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ နောက်ထပ် နာမည် မဖော်ပြထားတဲ့ မင်းသားတယောက်ပါသေးတယ်) အရက်မူးပြီး ကောင်မလေးရော၊ ကြားက မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ တယောက်ရော Cheongdamdongက မင်းသားအိမ် လိုက်အိပ်တယ်။ နောက်ရက်တွေကျတော့ ကောင်မလေးက သူ့ကို ၂ခါ rape လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲတာ။ ကောင်မလေးက ငွေလိုချင်လို့ တရားစွဲတယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။ မူးနေကြတယ် အိမ်မှာလည်း အတူအိပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူမှန်တယ် မှားတယ် မပြောတတ်ပါဘူး။ ကောင်မလေး ကလည်း မင်းသားမီးပေါက်စလို့လည်း တချို့က ထင်ကြတယ်။ ဘယ်သူဆိုတာ မဖော်ပြထားဘူး။
အဲဒီ့မင်းသားက park si hoo မလား.စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.တို့ကြိုက်တဲ့မင်းသားပဲ.တို့ကြားဘူးတာကတော့ဒီလူတကယ်ကျုးလွန်လားမကျူးလွန်းဆိုတာ ဆေးပညာနဲ့ဖော်ထုတ်လို့ရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်.မဗေဒါတို့ကမိန်းမပျိုလေးတွေဆိုတော့အသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူး.အများကြီးသိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး.ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲဒီအမူ့ဖြစ်ရင်ဒီလိုစစ်ကြတယ်လို့ကြားဘူးလို့ပါ.
Bridal Maskကိုတော့ အတော်ကြိုက်တယ်
4/25/2013 4:19 AM
@yati maung မဗေဒါလဲ ဒါတော့ သေချာမသိ။ မင်းသားကိုယ်တိုင်လဲ သွားပတ်သတ်ခဲ့လို့တော့ ခုလို စွတ်စွဲလို့ရတယ်ထင်တာပဲ။ ပြေလည်သွားမှာပါ။
@၀ိဝိ အင်း... ရေးနေတယ်... လာမယ်....